‘ब्युटी प्याजेन्ट’का नाममा याैन हिंसामा परेकी युवतीको पीडा: बेहोस बनाएर बलात्कार गरेका थिए « Dainik Online
प्रकाशित मिति : ५ जेष्ठ २०७९, बिहिबार २ : ३०
काठमाडौंl यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ। नपाओस् पनि किन, बलात्कारको घटना छ। त्यसमा पनि सन् २००२ कि मिस नेपाल विजेता माल्भिका सुब्बासम्मलाई जोडिएको छ।
बुधबार ‘सुसी खान जाने हो’ टिकटक एकाउटबाट एक युवतीले आफु बलात्कारको सिकार भएको जानकारी दिइन्। २/२ मिनेटका २० वटा भिडियोमा उनले कहिले ? कसरी ? बलात्कृत भइन् त्योबारे जानकारी दिएकी थिइन्।
आफू बलात्कृत भएकोबारे उनले सन् २००२ कि मिस नेपाल माल्भिका सुब्बालाई समेत जानकारी दिएकी थिइन्। तर, उनले उल्टै भनिदिएछन्, ‘ग्ल्यामसर क्षेत्रमा यो त नर्मल हो।’
२०७१ सालमा आयोजना गरिएको मिस ग्लोबल नामक ब्यूटी प्याजेन्टका क्रममा ति युवतीमाथि बलात्कार भएको थियो। उनले आफूलाई बलात्कार गर्ने र सहयोग गर्नेहरूको थर मात्र खुलाएकी छिन्। जसमा एक जना फोटो पत्रकार र कन्सल्टेन्सी सञ्चालक रहेको बताएकी छिन्।
रेग्मी थर गरेकी एक युवती १२ कक्षाको परीक्षा सकिएपछि ‘ब्युटि प्याजेन्ट’ मा सहभागी भइन् । उनले अडिसन दिइन्। तर, अडिसनबाट उनी छनोटमा पर्न सकिनन् । छनोटमा नपरे पनि त्यहाँ भएका तस्बिरहरू बाहिर आएपछि कुनै व्यक्तिबाट उनलाई म्यासेज आयो।
‘तिमी आउ फोटोसूट गरौं, अनि मोडल बनाउँछौं’ भनेर म्यासेज आयो। त्यति म्यासेज आएपछि उनी निकै उत्साहित भइन् । त्यसरी म्यासेज पठाउनेमा थिए, ति फोटोपत्रकार।
ति फोटोपत्रकार र कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले तस्बिर खिचे र उनलाई ५ हजार पैसा दिए । फोटो खिचेर उनीहरूले भने कि हामीले ‘ब्युटी प्याजेन्ट’ आयोजना गर्दैछौं। म त्योभन्दा अगाडि पनि ब्युटी प्याजेन्टमा भाग लिइसकेकी थिएँ। त्यसले म राजी भएँ। ब्युटी प्याजेन्टको विनर भइसकेपछि उनलाई ‘सक्सेस पार्टी’ दिने भनियो। उनी तयार भइन्।
एभरेष्ट होटलमा पार्टी आयोजना गरेको भनियो। उनी त्यहाँ गइन् । जबकि त्यहाँ कोही पनि थिएनन्। उनले प्रश्न गरिन्, खै त अरू मानिसहरू?
उनलाई बोलाएका व्यक्तिले भने, तिमी चाँडै आयौ। अरू विस्तारै आउँछन्। राति ६/७ बजेतिरबाट पार्टी सुरू हुन्छ। तिमी बस्दै गर।
केही समयपछि वेटर आएर लेमन जुस दिए । उनले भने,–यो वेलकम ट्रिट हो।
त्यसपछि उनले त्यो खाइन् । खाएको १० मिनेटपछि उनी आफुलाई अनकन्सियस महसुस गर्न थालिन्। त्यसपछि उनले त्यो एब्युजरलाई भनिन्- मलाई गाह्रो भयो, म घर जान चाहन्छु।
एब्युजरले उनलाई गाली गर्‍यो । तिमी विनर भएर यस्तो गर्ने ? तिम्रोबारे अरूले के सोच्लान् ? भनेर गाली गरे।
घटना सार्वजनिक भएपछि यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा चर्चा चलिरहेको छ । मिस नेपाल २०१८ श्रृखंला खतिवडा, नायिका पूजा शर्मा लगायतका सेलिब्रेटीहरू उनको पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूले घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्न समेत माग गरिरहेका छन् ।
A post shared by @allaboutdewyskin